NGABA I-CANNABIS INOKWENZIWA NGOKUSEMTHETHWENI E-US PHANTSI KUKAJOE BIDEN? IIMPAWU ZIXUTYWE. - IINDABA
Ngaba i-cannabis inokwenziwa ngokusemthethweni e-US phantsi kukaJoe Biden? Iimpawu zixutywe.
Iidemokhrasi ziqhuba iNkongolo. Uninzi lwabantu baseMelika luyayifuna. Nditsho noClarence Thomas ucinga ukuba ukuvalwa komanyano kwi-cannabis sisimumu. Kodwa iipolitiki zomdibaniso wokhula zihlala zimdaka.
Abantu abafuna ukubona i-cannabis isemthethweni kuzwelonke bafumana isimangaliso esamkelekileyo kwinyanga ephelileyo xa iNkundla ePhakamileyo uClarence Thomas wabuza umgaqo-siseko wokuvalwa kwentsangu.
Uluvo oluvela kwenye yeejaji zeNkundla ezigcinayo alutshintshi umthetho womanyano, kodwa lwafika ngonyaka apho amazwe abonakala ngathi ayakhuphisana ukuze afumane imvume kunye nokulawula uhlobo oluthile lwe-cannabis esemthethweni. Ukusukela nge-1 kaMatshi, amazwe amahlanu enze okanye aqinisa umthetho wokuba kusemthethweni i-cannabis. Ukusukela nge-1 kaJulayi, intsangu yokuzonwabisa yayisemthethweni kumazwe ali-18 kwaye intsangu yonyango yayisemthethweni kwi-36.
Kwaye leyo yinxalenye nje yomfutho ocebisa ukuba utshintsho lunokuza kwimithetho yomanyano ye-cannabis. Kunyaka ophelileyo, iiDemokhrasi kwiNdlu yabaMeli bapasise i-cannabis esemthethweni ye-cannabis - okokuqala abenzi bomthetho be-federal bavuma eso siphakamiso - kodwa yavalwa kwi-Senate elawulwa yi-GOP ngoko. Kulo nyaka, iiDemokhrasi zilawula omabini amagumbi eCongress.
Yonke loo nto yongeza ekukhuleni kwethemba phakathi kwabameli abaninzi bamalungelo e-cannabis ukuba ukwenziwa ngokusemthethweni komanyano kunokuba kufutshane.
Bendihlala ndisithi ukusemthethweni kwe-federal ayisiyiyo 'ukuba.' Kuhlala 'nini,' utshilo u-Adam Wilks, ongumphathi oyintloko kunye ne-Irvine-based cannabis retail chain One Plant kunye ne-Canadian-based investment firm Captor Capital. . Xa uWilks efunda iingxelo zikaThomas (epapashwe nge-28 kaJuni) exhasa amalungelo karhulumente malunga ne-cannabis, wathi, Ibhalbhu yokukhanya yahamba entlokweni yam. Ekugqibeleni, ixesha lifikile.
Ukuba i-cannabis isemthethweni kuzwelonke, utshintsho lunokuba nezibonelelo ezinkulu zombini kwishishini kunye nabathengi, nakwimimandla efana neCalifornia apho intsangu sele isemthethweni kubo bonke abantu abadala.
I-Uruguay kunye neCanada yayingamazwe amabini okuqala ukwenza ngokusemthethweni i-cannabis kubantu abadala. NgoMvulo, iNkundla ePhakamileyo yaseMexico ivotele ukuchasa ukusetyenziswa komntu kunye nokuba nezinto, inyathelo elibeka uxinzelelo kumthetho welizwe ukuba bavume imithetho evumela ukuthengiswa kwe-cannabis kwindawo eya kuba yeyona ntengiso inkulu emhlabeni.
Ngeli xesha, nangona i-91% yabantu abadala base-US baxelele abavoti be-Pew kulo nyaka ukuba i-cannabis kufuneka ibe semthethweni ubuncinci kusetyenziso lwezonyango, umthetho wobumbano usahlela ichiza njengeShedyuli ye-narcotic. Olo luhlobo olugcinelwe iziyobisi ezifana ne-heroin ekuthiwe zikhobokisa kakhulu kwaye azinaxabiso lezonyango, ngaphandle kophando olukhulayo olubonisa ukuba akukho nyani nge-cannabis.
Kunyaka ophelileyo, iiDemokhrasi zeNdlu zamkele umthetho oyilwayo onokuthi uthathe i-cannabis kwishedyuli ngokupheleleyo, kodwa ayizange iphume emhlabeni kwiSenethi yeRiphabhlikhi. NgoMeyi, u-Rep. Jerry Nadler, D-NY, waphinda wazisa uMthetho OKUNYE. Kwaye kwinyanga ephelileyo, isigebenga esikhulu saseAmazon, phakathi kwabanye, sathi siza kuphembelela ukuxhasa eli tyala. (IAmazon ikwathe iyakuyeka ukuvavanya uninzi lwabasebenzi bayo abazizigidi ezisisi-1.3 nge-cannabis.)
Kodwa kwanamanye amaRiphabhlikhi axhasa ukwenziwa ngokusemthethweni komdibaniso achasene namagatya kuMthetho ONGENZI, njengerhafu yomdibaniso eya kuxhasa iinkqubo zokulingana kwezentlalo ezinxulumene ne-cannabis.
Umongameli uJoe Biden khange ancede ukuhambisa inaliti. Ngelixa evakalise inkxaso kumalungelo entsangu kunyango kunye nokungabi nalulwaphulo-mthetho, uye wayeka ukubiza ukuba kwenziwe ngokusemthethweni ngokupheleleyo.
Ngeli xesha, amazwe amaninzi nangakumbi ayaqhubeka nokubethelela iimpumlo zawo kuthintelo lomdibaniso kwaye avume iinkqubo zawo ezilawulwayo ze-cannabis, kunye nomfutho owongezelelekileyo njengoko oorhulumente befuna iindlela zokongeza imisebenzi emitsha kunye nemijelo yengeniso ekukhanyeni kwe-COVID-19.
NgoLwesibini, imithetho yokuzonwabisa ye-cannabis yaqala ukusebenza eNew Mexico. Imithetho efanayo yakhatywa ngoLwesine eVirginia naseConnecticut, ngelixa uMzantsi Dakota waqala ukuvumela i-cannabis yonyango kwangolo suku lunye.
Ukuqhawulwa konxibelelwano phakathi komgaqo-nkqubo womanyano kunye nento eyenzekayo kumazwe yinto uTomas ayigxininise kwiingxelo zakhe kumthetho we-cannabis.
Ityala lokuqala liqala ngokuxhwila usomashishini wezobugcisa waseSanta Cruz, ebulala
Indima yamva nje kaJustin Bieber: I-Marijuana pitchman
Amasekela e-Alameda County sheriff akhangela ngokungekho mthethweni e-Oakland yase-Oakland, intsangu yaseSan Leandro iyakhula
Indlela yangoku yoRhulumente we-Federal yi-half-in, i-half-out-out-out-out evumela ngaxeshanye kwaye inqande ukusetyenziswa kwentsangu yendawo, uThomas wabhala. Le meko iphikisanayo nengazinzanga yemicimbi icinezela imigaqo esisiseko ye-federalism kwaye ifihla imigibe kwabo bangalumkanga.
UTomas waqukumbela ngokuthi ukuvalwa komanyano kungasayi kuba yimfuneko okanye kufanelekile.
Okwangoku, uBracken uyibiza ngokuba yiminqweno enqwenelekayo kwicala leshishini le-cannabis ukufunda kakhulu kwiingxelo zakhe.
Kubalimi be-cannabis eCarlifonia - enegama njengekhaya kwezinye zezona cannabis zibalaseleyo emhlabeni - ukuthengisa ngaphandle kwelizwe imveliso yabo kuya konyusa ingeniso kunye nengeniso yerhafu karhulumente.
Kuya kutshintsha umdlalo xa sele sikwazi ukuwela imigca karhulumente ngeemveliso ze-cannabis, utshilo uWilks.